Fri, Jun 22, 2018 | 01:25:05 NST
यसवर्षको मदन पुरस्कार आज वितरण गरिँदै
काठमाडौं, असोज १६ – यसवर्षको मदन पुरस्कार तथा जगदम्बा श्री पुरस्कार आइतबार वितरण हुँदैछ । ललितपुरको पाटननढोकामा रहेको रातो बंगला स्कुलमा विशेष कार्यक्रम गरी ऐना कथा संग्रहका लेखक रामलाल जोशीलाई मदन पुरस्कार र सर्जक लीलबहादुर क्षेत्रीलाई जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मान गर्न लागिएको हो ।
नगरकोटीको ‘घाटमान्डुु’ सार्वजनिक
काठमाडौं, असोज १६ – साहित्यकार कुमार नगरकोटीको नयाँ कृति घाटमान्डु शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ । घाटमान्डु उत्सव नाम दिइएको विमोचन कार्यक्रममा पत्रकार वसन्त बस्नेत, कविहरु विप्लव प्रतीक र चन्द्रविर तुम्बापो तथा नगरकोटीका लिटररी एजेन्ट राजन गोदारले घाटमान्डुमा संगृहित रचना तथा कविता वाचन गरेका थिए ।
सम्झनामा वरिष्ठ तबलाबादक पण्डित उपाध्याय
वरिष्ठ तबलाबादक पण्डित होमनाथ उपाध्यायको सम्झनामा भारतीय साँस्कृतिक केन्द्रमा सांगीतिक कार्यक्रम गरिएको छ ।
​मगर भाषाको कविता संग्रह ‘खाङ्ङराङ साङ्ङरा’ विमोचित
काठमाडौं, असोज १३ – पत्रकार भक्ति रिजालको मगर भाषाको कविता संग्रह ‘खाङ्ङराङ साङ्ङरा’ (डोकोभरी गुराँस) को विमोचन गरिएको छ ।
तरुणले भन्यो, 'बुवाको शव ल्याउने पैसा थिएन !'
दुईहप्ता जति भएको थियो तरुण क्लास नआएको । फोन गर्दा स्विच अफ भन्यो । धेरै प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । कता गयो होला यो मान्छे ? यत्रो दिनसम्म किन नआएको होला ? मनमा यस्तै यस्तै प्रश्नहरु उब्जिन्थे । म र तरुण क्लासमा सँगै बस्ने गर्थ्यौं । ११ कक्षामा छदाँ चिनजान भएको थियो उसँग ।
सपनाबाट ब्युँझेपछि तरबार फ्याँके काजीबाले...
काठमाडौं, असोज ९ – दसैँ भन्ने बित्तिकै हामी प्रायः पंक्षीको काटमार सम्झन्छौँ । खसीबोका, राँगाभैँसी, कुखुरा, हाँसलगायत प्राणीको बध र त्यसबाट प्राप्त मासुलाई उत्सव–प्रसादका रुपमा लिनेको संख्या नेपाली समाजमा धेरै छ तर शास्त्रहरूले निहत्था र कमजोर पशुपंक्षीको हत्याबाट प्राप्त हुने कुरालाई उपयोग गर्न निषेध गरेको छ ।
यस्तो देखिन्छ मेरो ऐनामा (अडियोसहित)
यसवर्षको मदन पुरस्कार रामलाल जोशीको कथा संग्रह ‘ऐना’ले जितेको छ । मोफसल त्यो पनि सुदूरपश्चिममा बसेर कलम चलाउने जोशीको ‘ऐना’ मदनपुरस्कारका लागि मनोनयनमा पर्नु अघिसम्म केहीले मात्रै हेरेका थिए । मनोनयनमा परेपछि धेरैका ध्यान खिच्यो ।
९८ वर्षका राष्ट्रकवि गुनगुनाउँदै लेख्दैछन् महाकाव्य
९८ औँ जन्मदिन मनाउन पाउनु गौरवमय त हो नै । आफ्नो कर्म, पौरख र सिर्जनाको कुरा गर्दै जन्मदिन मनाउनु झनै गज्जवको कुरा । बसि खाने बेला भनिने बुढ्यौलीमा पनि आफ्नो सिर्जनशिलताले कलमको धार उद्याइरहन धेरैले रहरै गर्दैनन् ।
हरिहर विरहीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘आगो निभेको छैन’ विमोचित
पत्रकार हरिहर विरहीको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘आगो निभेको छैन’ बिहीबार विमोचन गरिएको छ । पुस्तकमा वणर्न गरिएका दुई शहिद वोधदत्त उपाध्याय र केशव कोइरालाका श्रीमतीहरु क्रमशः विद्या घिमिरे र गुणकुमारी कोइरालाले पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो ।
मनोज गजुरेल भैरव स्मृति सम्मानबाट सम्मानित
भैरव स्मृति सम्मान २०७२ बाट हाँस्यव्यङ्ग्यकार मनोज गजुरेल सम्मानित हुनुभएको छ । बुधबार हेटौंडामा साहित्य संगम मकवानपुर तथा सिस्नुपानी नेपाल मकवानपुरले संयुक्त रुपमा गरेको कार्यक्रममा गजुरेललाई सम्मानित गरिएको हो ।
भारोत्तोलन खेलाडी सुरेन्द्र हमालको आत्मकथा ‘ओलम्पियन’ विमोचित
काठमाडौं, असोज ४ – भारोत्तोलन खेलाडी सुरेन्द्र हमालको आत्मकथा ‘ओलम्पियन’ को मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ओलम्पियन मिनि कर्बड हलमा विमोचन गरिएको छ ।
​रामलाल जोशीको ऐना कथा संग्रहलाई मदन पुरस्कार
काठमाडौं, असोज ४ – मदन पुरस्कार गुठीले हरेक वर्ष प्रदान गर्ने मदन पुरस्कार यो वर्ष रामलाल जोशीको कथासंग्रह ऐनालाई प्रदान गरिने भएको छ । त्यस्तै जगदम्बाश्री पुरस्कार साहित्यकार लीलबहादुर क्षेत्रीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गुठीले गरेको छ ।
बौद्धिक क्रान्ति गरौंं
युद्धको क्रान्तिलाई नजिकैबाट देखेको छु क्रान्तिमा हजारौं मानव बलीचढेको सुनेको छु बलि चढेको मात्र होइन चढाएको बुझेको छु हो त्यसैले युद्धको क्रान्ति शब्ददेखि डराउँछु
आठ कविका आठ कविता ‘आफर’ विमोचित
उन्मुक्त पुस्ताको कविता कृति आफर शनिबार विमोचन गरिएको छ । कलाकार अशोक सिवाकोटीले कवि केवल बिनाबीको कविता झन्डाको खेतीको मञ्चन गरेर आफरको विमोचन गर्नुभएको हो ।
के मेरो फेरि विवाह हुन्छ ?
प्रमिलाका श्रीमान् मरेछ्न रे । गाउँमा ठूलै हल्ला चल्यो । ६ महिना मात्र भएको थियो प्रमिलाको विवाह भएको । उनका श्रीमान् नेपाल आर्मीमा थिए । शान्ती सेना मिसनमा सामेल हुन सुडान गएका थिए ।
चाँदीको घेराभित्र थुनिएको कर्णाली
कर्णाली चुनाव हुँदा काम लाग्ने भोट मात्र होइन, अथाह सम्भावनाको खानी हो । सूरम्य भाषा, कलाको उद्गम हो । देशलाई कर्णालीले धेरै दियो । भाषा र सभ्यताले मुहार फेरिदियो । तर आफू कहिल्यै फेरिएन । आशा गरेकाहरु नालायक बनिदिँदा कर्णाली गरिबी हेर्न जानेहरुका लागि तस्बिर मात्र बन्यो ।
तिम्रो र मेरो पवित्र नाता नेपाली हुनसक्छ
छुट्यौं यसरी कि वर्षौंवर्ष भेट भएन मुख त एउटै थियो, एउटै पेट भएन सपना जस्तै भत्कियो सुन्दर धरहरा लतारिदैँ झर्यो चंगा, धन्य चेट भएन ।
लिम्बू भाषामा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम छापियो
पाँचथर, भदौ ३१ – पाँचथरमा पहिलोपटक निर्माण गरिएको लिम्बू भाषामा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम छपाई कार्य सम्पन्न भएको छ ।
त्यो ‘घरवाली’ले ‘आमा’ शब्द उच्चारण गरिन्, मलाई सहन झन गाह्रो भयो । मैले आँखा बन्द गरेर आक्रोशको आवेगलाई रोक्ने कोशिस गरें, तर सकिँन । रिसमा आँखा पनि मैले देखिनँ । के के गरें गरें ? मेरो त्यस्तो व्यवहार थेग्न नसकेर उनीहरुले हतार हतार मलाई ढोका भित्र छिराए र चाबी लगाए ।
सुनिता दनुवारले लेखेको आँशुको शक्ति सार्वजनिक
काठमाडौं, भदौ २७ – शक्ति समूहकी पूर्व अध्यक्ष सुनिता दनुवारद्वारा लिखित आँशुको शक्ति नामक पुस्तक सोमबार एक समारोहबीच लोकार्पण गरिएको छ । घोस्ट राइटिङ नेपालद्वारा प्रकाशित पुस्तक पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विमोचन गर्नुभएको हो ।
​नेपाली म्युजिक भिडियो अवार्ड युएईको आबुधाबीमा हुने
भदौ २४ – युएईको आबुधाबीमा नेपाली म्युजिक भिडियो अवार्ड हुने भएको छ । आउँदो सेप्टेम्बर १६ (भदौ ३१) शुक्रबार आबुधाबीको फोल्कनोर थिएटरमा हुने कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजकले जनाएको छ ।
बन्दीगृह बसेर साहित्यकार बनेका बिपी
प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई तत्कालीन सरकारले २०१७ साल पुस १ गतेको ‘कु’ पछि राखेको सुन्दरीजल बन्दी गृह साहित्य सिर्जनाको स्थल बन्न पुग्यो ।
काठमाडौं, भदौ २३ – प्रगतिशील लेखक सङ्घले यस वर्षको प्रलेस प्रतिभा पुरस्कार साहित्यकार विनोद मञ्जनलाई प्रदान गर्र्ने भएको छ ।
कथा : तीजको व्रत
- बालकृष्ण कट्टेल 'बादलको रंग कस्तो हुन्छ?' पार्वतीले सोधिन । 'ठट्टा नगर न,' शिव बोले । 'भन न त,' पार्वतीले आग्रह गरिन । 'कालो ...!' शिवले छोटो उत्तर दिए ।
तीजको अवसरमा युएईमा रक्तिमको रमाइलो
दर्शकको बाक्लो उपस्थिती रहेको सभाहल भित्र जब रक्तिमका कलाकार प्रवेश गरे, लाग्थो, हामी दुई हप्ता अघि राजधानीमा रक्तिमले आयोजना गरेको कर्णाली बचाउँ अभियानमै छौं । गायक शर्माले श्रम बेच्न विदेशिएका नेपाली माझ फेरी उस्तै शब्द गुन्जाए ।
पद्मश्री पुरस्कार नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास चीरहरणलाई
काठमाडौं, भदौ १९ – २०७२ सालको पद्मश्री पुरस्कार नीलम कार्की निहारिकाको उपन्यास चीरहरणले पाउने भएको छ । अन्तिम ५ को सूचीमा सार्वजनिक गरिएका पुस्तक मध्येबाट चीरहरणलाई पद्यमश्री पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने निर्णय भएको खेमलाल हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
बादलले बचाएका थिए बाबुरामलाई जिउँदै पुरिनबाट (पुस्तक अंश)
बाबुरामले असहमतिका लिखित चार बुँदा र १३ बुँदा रोल्पाको खरिबोटमा लगेर प्रचण्डलाई बुझाएका थिए । यस घटनापछि नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’, रवीन्द्र श्रेष्ठहरुले बाबुरामलाई ‘जिउँदै खाल्डोमा पुर्ने’ कुरा गरे ।
​रमेश शुभेच्छु र गोविन्द नेपालीलाई मोती पुरस्कार
काठमाडौं, भदौं १७ – यस वर्षको युवा वर्ष मोती पुरस्कार साहित्यकार रमेश शुभेच्छु र गोविन्द नेपाली सार्कीलाई प्रदान गरिएको छ । नेपाली शिक्षा परिषद्ले राष्ट्रिय विभूति युवाकवि मोतीराम भट्टको १५१ औँ जयन्तीको अवसरमा पाँचथरका शुभेच्छु र जुम्लाका सार्कीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
मोतीरामलाई केटी भनेर जिस्क्याउँथे : थोरै समय बाँचेर पनि अविस्मरणीय योगदान
थोरै बाँचेर नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै धेरै योगदान पुर्‍याउने मोतीराम भट्टलाई नेपाली साहित्यका प्रेरक व्यक्तित्व, कुशल नायक र होनहार प्रतिभा मानिन्छ । मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यमा भानुभक्त आचार्यपछि आउने सशक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।
मोतीराम भट्टको जन्मजयन्ती मनाईंदै
काठमाडौं, भदौ १६ – नेपाली साहित्यका विशिष्ट व्यक्तित्व मोतीराम भट्टको १५० औँ जन्मजयन्ती बिहीबार देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ ।
कतै उत्साह छ दरमा सँगै छ तडकभडक कतै डाहा छ मुटु धड्किदैछन् धडक धडक रातै सारी लाउनु पर्ने मिठै खानु पर्ने रे दर फेसन बनेको छ चारैतिर के गाउँ के शहर
हिउँ जस्ता चिसा गोपाल, घाम जस्तै प्रखर
संगीतकार योञ्जन नेपाली संगीतलाई पारिलो घाम जस्तो, बहिरने बतास जस्तो, बगिरहने खोला जस्तो गुन लगाएर बिदा भएको १९ वर्ष भयो । बिस्तारै धेरैले उहाँलाई भुल्दै गए । तर गीतकार थापाको मनमा योञ्जन अहिले पनि बोलिरहन्छन्, आँखामा उसै गरी डुलिरहन्छन् ।
लोग्नेहरु बिक्रीमा, होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था (अडियोसहित)
गाइजात्रे सभामा गाईजात्राका नमूनाहरु कम्ति थिएनन् । सभाका राष्ट्रपति, दुई दुई जना प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरु सबैको अनुहार गाइजात्रे हाँसोले हौसिएको थियो । सभामा झुक्काएर हो कि झुक्किएर हो राष्ट्रपति भएकादेखि निर्णायक समितिका पदाधिकारीलेसमेत गाईजात्रे हाँसो फैलाए ।
गोपाल योञ्जन : सम्झनामा उहाँका गीत गाइने
काठमाडौं, भदौ २ – संगीतकार तथा गीतकार गोपाल योञ्जनको सम्झनामा बिहीबार विशेष सांगीतिक कार्यक्रम हुँदैछ । संगीतकार योञ्जनको ७४ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर शुभारम्भ द म्युजिकल जर्नीको आयोजनामा हुने कार्यक्रममा विभिन्न गायक गायिकाले उहाँका गीत गाउने छ ।
लिफ्ट दिने केटी, भाग - २
हानिकारक छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि लत बस्दो रहेछ मान्छेलाई । आफ्नो मृत्यु आफै किन्न बाध्य थिएँ । टेन्सन त दुर, तर धेरै बाँचुला भन्ने सपना चकनाचुर । यहि रहेछ लतमा पर्ने को नियती । र त भन्छ्न, मान्छेलाई खाने मान्छे नै हो, यमराजलाई दोष नदेउ ।
​यादव खरेल र दिप श्रेष्ठलाई इन्द्र–मोहन स्मृति पुरस्कार
विराटनगर, साउन २९ – विराटनगरमा इन्द्र–मोहन स्मृति गुठी धनकुटाले यादव खरेल र दिप श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको छ । नेपाली संगीत क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको भन्दै उहाँहरुलाई सम्मान गरिएको हो ।
लिफ्ट दिने केटी
समिर बेल्बासे । सातदोबाटो पुगिसक्दा अचानक मेरो बाइक गुड्न छाड्यो। पेट्रोल सकिएको रहेछ। आकाशले घुम्टो ओढ्न लागेको जस्तो देखिन्थ्यो। जुनको टिलपिल टिलपिल उज्यालो र फाट्टफुट्ट सवारीसाधनहरु मात्र देखिन्थे सडकमा। घडीले ७ बजिसकेको संकेत गर्दै थियो। नजिकै पेट्रोल पम्प छ कि भनेर नजर डुलाएँ। देखिन।
रंगकर्मी पोखरेल अस्वस्थ, आइसियुमा भर्ना
काठमाडौं, साउन २६ – वरिष्ठ रंगकर्मी सुनिल पोखरेल अस्वस्थ भएका छन् । रंगकर्मी पोखरेलको स्वास्थ्यमा मंगलबार राति समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
​कथा – हेमन्त, ऋतु र तीज
मतानको छेउमा फ्यात्त हलो भुइँमा फ्याँकेर आरुबोटे काका घरतिर आए । जुठेल्नाका छेउमा भाँडा माझ्दै गरेकी छोरीलाई भने ए चमेली जा भित्रबाट चिसो पानी लेर आ । टोपीले पसिना पुछ्दै बसिराथे । चमेलीले मैलो जगमा पानी ल्याएर दिई । काका जंगिए – के हो यो जग माझ्न सकिनस् ?
​झाँसीकी रानीकी लेखिका महाश्वेता देवीको निधन
साउन १३ – प्रसिद्ध बंगाली लेखक तथा सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवीको बिहीबार ९० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उहाँलाई गएको जुलाई २३ मा हृदयघात भएको थियो । उहाँको कलकत्ताको बेले व्यू अस्पतालमा दुई महिनादेखि उपचार भइरहेको थियो ।